Vaive varwiri vehondo yerusununguko nhasi vayambira sangano reEuropean Union, EU, kuti havasi kuzopeta maoko nyika idzi dzichishandisa MDC kupamba nyika zvekare sezvadzakaita apo dzakapamba Africa.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, munyori anoona nezvevakarwa hondo muPolitiburo yeZanu PF, VaDouglas Mahiya, vati zviri pachena kuti nyika dzemuEU dzatanga zvakare kurwisana neZimbabwe uye vati vakazvipira kupinda muhondo zvekare.
Mashoko aVa Mahiya anotevera mashoko akaburitswa neEU svondo rapfuura ichiudza hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu pamwe nekusavambunyikidza.
Izvi zvinotevera kupambwa nekurohwa kwevanhu vakawanda munyika vanosanganisira nhengo dzeMDC pamwe nenhengo dzemasangano anoshanda akazvimirira.
VaMahiya vati havasi kuzorega simba rekutonga nyika richidzokera kumuvengi zvekare vachiti EU iri kutsigira mapato anopikisa nekuti iri kuda kupamba Zimbabwe zvekare.
VaMahiya varamba kuti pane vanhu vari kupambwa kana kumbunyikidzwa munyika vachiti mashoko emanyepo ari kutaurwa nevavengi.
Vatiwo kana ivo pachavo vaizviita muhondo zvekutuara manyepo senzira yekurasisa muvengi.
Asi munyori anoona nezvekuchengetedzwa zvakanaka kwevanhu muMDC, Muzvare Maureen Kademaunga, vashora mashokoaVaMahiya vachiti semurwi wehondo, VaMahiya nevamwe vavo ndivo vanofanira kuziva kurwadza kunoita hudzvanyiriri kana kumbunyikidzwa.
Muzvare Kademaunga vaudza Studio7 kuti hachisi chokwadi kuti MDC inoita zvido zvevarungu vachiti ibato rinomirira zvido zvevana vese vemuZimbabwe kwete zvevarungu.
Muzvare Kademaunga vaudza Studio7 kuti kubva musi wa16 Nyamavhuvhu kusvika nhasi, pane nhengo zana nemakumi mapfumbamwe neimwe dzebato ravo dzakapambwa kana kumbunyikidzwa uye dzimwe dzenyaya idzi dzave kuongororwa nemapurisa.
Zvichakadai, vanokokera nhengo dzeZanu PF muNational Assembly, VaPupurai Togarepi, vakumbira hurumende kuti iumbe mutemo unoranga vanhu vanoenda kunze kwenyika vachinokumbira kuti nyika itemerwe zvirango zvehupfumi izvo vati zviri kutambudza vakawanda munyika.
Asi VaMathias Matewu veMDC vati zvirongwa nemitemo iri kugadzwa nehurumende ndizvo zviri kuomesera vanhu.
Mune imwewo nyaya sachigaro vekomiti yekanzuru yeHarare inoona nezvevashandi,VaJacob Mafume, vazivisa kuti kanzuru yeHarare ichawedzera vashandi vayo mari nezvikamu zvinodarika zana inove mari yavaifanira kupihwa muna 2017 na2018 kuti vakwanise kuramba vachiuya kubasa.
Asi VaMafume vati izvi zvinokwanisa kuitika chete kana hurumende ichinge yapa mvumo kukanzuru kuti iwedzere bhajeti rayo regore rino kana kuti Supplementary Budget iro vati rakatoendeswa kubazi rinoona nezvematunhu nemadhorobha.